အသက်ကလေး ရလာလို့လား မသိဖူး ခုနောက်ပိုင်း သွားလိုက်ရတဲ့ ဆေးခန်း၊ ရန်ကုန် ပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက ဆေးခန်း ခနခန သွားရတယ်၊ ခြေထောက်အတွက် ပြရတာ ဆေးခန်းနှစ်ခု နေမကောင်းလို့ ပြရတာကလဲ နှစ်ခါ သုံးခါပဲ၊ ကြီးကြီးမားမား ရောဂါ မဖြစ်လို့ တော်သေးတယ်၊ ဟိုးအရင်တုန်းကဆို တော်တော် ကျမ်းမာတာ ၂၀၁၆ အထိ တစ်နှစ်လုံးမှ ဆေးခွင့်က နှစ်ရက် သုံးရက်ယူတာ ဒါတောင် နားချင်လို့ ချောင်းဆိုး လည်ချောင်းနာတာလောက်နဲ့ ယူလို့ မဟုတ်ရင် လိုတောင် မလိုဖူး၊ ၂၀၁၇ မှာတော့ တော်တော် ချူချာတယ် နှစ်လ တစ်ခါလောက် နေမကောင်းဖြစ်တယ် ဆေးခွင့် မယူလို့ကို မရတာ။ စလုံးက လူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူများ ဟပ်ချိုးဆို ကိုယ့်ပါ ကူးတော့တာ၊ အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး ပင်ပန်းတာကြောင့်လဲ ပါမယ်။ နေမကောင်း ဖြစ်တိုင်းလိုလို Throat infection ၀င်တာများတယ်။ ပေတေပြီး ဆေးခန်း မသွားရင် တော်တော်နဲ့ မပျောက်ဖူး ပိုပိုဆိုးလာတယ်။ အလုပ်ကလဲများတော့ ခွင့်တော်ရုံတန်ရုံ မယူဖြစ်ဖူး၊ လူတွေက နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့သူဆို လစာတွေ အများကြီး အလကားနေရင်း ရပြီး အေးအေးသက်သာ လုပ်ရတယ် ထင်ကြတယ်၊ ကိုယ်တွေ ဘယ်လို ရုန်းကန်ရလဲဆိုတာ ဘ၀တူတွေပဲ သိတယ်။ နေမကောင်းလဲ စားစရာမရှိရင် အပြင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သွားဝယ်ရင်ဝယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြင်ရတယ် ဆေးခန်းသွားလဲ တစ်ယောက်တည်းသွား အိမ်အလုပ်လဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြစ်အောင် လုပ်ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်တွေ အပြင်မှာ လျှောက်လည်နေတာတွေ ဈေးဝယ်ထွက်တာတွေ ခရီးသွားနေတာတွေပဲ မြင်ပြီး ဘ၀က အရမ်းလွယ်ပြီး သာယာတယ် ထင်နေကြတယ်။ မနှစ်တုန်းကဆို အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲ လျှောက်သွားနေတာ၊ ဒါပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန် သေအောင် လုပ်ရတာ ညဘက်တွေ တစ်ညလုံး မအိပ်ဘဲ လုပ်ဖူးတယ်၊ ပိတ်ရက်တွေပါ အပါ နေ့စဉ်ရက်ဆက် လုပ်ရတာတို့ ဘယ်သူမှ မသိကြဖူး။ မနှစ်က အလုပ်ထဲမှာ တော်တော် စိတ်ညစ်ရတာ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဖူး တစ်ရုံးထဲ လုပ်တဲ့သူ အကုန်လုံးပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ပြသနာတွေ online တက်ပြီးတော့ ပြောဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဖူး အဲလို လူတကာ သိအောင်ပြောပြီး attention ယူတာ သနားအောင် လုပ်တာ မှန်တဲ့ နည်းလမ်းလဲ မဟုတ် ဘာမှလဲ ပြေလည်သွားမှာမှ မဟုတ်တာ။ အဲလိုပြောလို့ နိုင်ငံခြားမှာ နေရတာ မကောင်းဖူးလို့ မဆိုလိုပါဖူး ကောင်းတာလေးတွေလဲ အများကြီးပါ။ အရေးကြီးတာ ကိုယ်နေရတဲ့ဘ၀မှာ ပျော်အောင်နေတတ်ရင် ပြီးတာပဲ။
ပြောရင်း ပြောရင်း မဆိုင်တာတွေ ရောက်ကုန်ပြီ .. ပြောချင်နေတဲ့ အကြောင်းက မွေးရပ်မြေ ပြန်တုန်းက ဆေးခန်းသွားပြတဲ့ အကြောင်းလေး၊ မပြန်ခင် တစ်ရက်နှစ်ရက်က လည်ချောင်း စနာတယ် သိပ်မဆိုးသေးတာရော အပြင်လဲ မထွက်ချင်တာနဲ့ ဆေးခန်းသွားမပြဖြစ်ဖူး။ ဟိုရောက်တော့ ပိုဆိုးလာတာနဲ့ ဆေးခန်းသွားပြလိုက်တယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အိမ်နဲ့ နီးပြီး ပြနေကျ ဆေးခန်းနဲ့ နောက်ဆေးခန်းတစ်ခုက ပိတ်ထားတယ်။ အဲဒါနဲ့ နောက် နီးတဲ့ တစ်ခု သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲ :D ဆရာဝန်ရှိတဲ့ အခန်းထဲ ၀င်သွားသွားချင်းတွေ့လိုက်တာက ပင့်ကူမျှင်တွေ အများကြီး တချို့ဆို အပေါ်တင် မကဖူး ကုတင် နားတောင် ရောက်ချင်နေပြီ ပြီးတော့ ဆေးတွေလား စာအုပ်တွေလားမသိတင် ထားတဲ့ ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတဲ့ စားပွဲ တစ်လုံးလဲ တွေ့မိတယ် ထင်တာပဲ။ အထဲရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီး ထုံးစံအတိုင်း သွေးပေါင်ချိန် နှလုံးခုန်သံ နားထောင်တယ် ဘာဖြစ်သလဲ မမေးသေးဖူး ကိုယ်လဲ ပြောခွင့်မရသေးဖူး၊ ဘာလို့ ဘာဖြစ်လို့ လာပြတာလဲ အရင် မမေးတာလဲ မသိဖူး။ ဟိုမှာဆို ဆရာဝန်နဲ့တွေ့တာနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လာပြတာလဲ အရင်မေးတာ။ သူစမ်းချင်တာ စမ်းပြီးတော့ ကိုယ်က sore throat ဖြစ်လို့လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ သူက ဟုတ်လားတဲ့ ခုတလော လူတိုင်းဖြစ်တယ်တဲ့ ကိုယ်က သူ့ကို သူ့မျက်စိနဲ့ စစ်စေချင်တာ ပါးစပ်တောင် ဟပေးနေပြီ. ဒါပေမယ့်သူက အေးဆေး မလိုဖူးတဲ့ လူတိုင်း ဖြစ်တာတဲ့ ဟင့်... :( ပြီးတော့ သူဆေးတွေထားတဲ့ စားပွဲထားပြီး ဆေးထိုးဖို့ ပြင်နေတယ် ကိုယ့်ကို ဘာမှ မပြောဖူးနော် ဆေးထိုးမယ်တို့ ဘာတို့ သူပြင်နေတာမြင်တော့ ကိုယ်လဲ အတော်လန့်သွားတယ် sore throat ဖြစ်လို့ ဆေးထိုးတာ တစ်ခါမှမှ မကြုံဖူးတာ။ အဲဒါနဲ့ အတင်း ငြင်းရတယ် ဆေးမထိုးချင်ဖူးလို့ ဒါပေမယ့် အာခေါင်နဲ့ လည်ချောင်းကိုတော့ ကြည့်ပေးပါလို့ အရင်က infection ၀င်ဖူးလို့ ပြန်ဖြစ်မှာ ဆိုးလို့ပါလို့ ဒါပေမယ့် သူက အတော် ခေါင်းမာတာ လုံးဝမကြည့်ဖူးချည်းပဲ လူတိုင်းဖြစ်နေတာ ဆိုပြီး ဆေးတွေ ပေးလိုက်တယ် ဆယ်ရက်စာတောင် (ပုံထဲမှာကြည့် ဆေးသုံးမျိုးကို ဆယ်ရက်စာ)၊ အရင်က ဒီထက်မကဆိုးတဲ့ အခြေအနေမှာ သွားပြတာတောင် အများဆုံး သုံးရက်စာပဲ ပေးတယ်၊ ခုတော့ တစ်ခါတည်း ဆယ်ရက်စာတောင်မှ၊ ကိုယ်က သူ့ကို ကြည့်စေချင်တာက အရင် ဆရာဝန်တွေဆို သေချာကြည့်ပေးတာ၊ sore throat ဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် အဲဒါကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းက အများကြီးရှိတယ် infection ၀င်တာက အဲဒီထဲက အကြောင်းရင်းတစ်ခု. ကိုယ်က root ကိုလိုက်စေချင်တာ သူက ပြီးစလွယ် ကြည့်တောင် မကြည့်ဖူး ရက်ရက်ရောရော ဆေးတွေ ပေးပစ်တာ၊ ဈေးကတော့ သက်သာပါတယ် ၃၀၀၀ ပဲပေးခဲ့ရတယ်။ နောက် မကြိုက်တာတစ်ခုက ဆေးခန်းက လူနာပြတဲ့အခန်းရဲ့ ဘေးမှာ ဟာလာဟင်းလင်းကြီး အပြင်က ဖြတ်သွားတဲ့ လူတွေလဲ ကိုယ့်ကိုမြင်ရ ကိုယ်လဲ သူ့ကိုမြင်ရနဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ အားလုံး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိတယ်ပြောရမယ် :P အဲဒီဆေးတွေတော့ သောက်လဲ မသောက်ရဲတာနဲ့ မသောက်ခဲ့ဖူး။ အဲဒီဆေးခန်းကတော့ နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့မှ သွားမပြဖူး။ ကိုယ်က ခနခန ဖြစ်နေလို့ ကင်ဆာများ ဖြစ်ချင်နေပြီလား တွေးပူတာ သူက လက်လွတ်စပယ် လုပ်ရက်တယ်။ 😓😢 ဘယ်ဆေးခန်းလဲ သိချင် တိုးတိုးတိတ်တိတ်လာမေးနော်။ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှ အိမ်နဲ့နီးတဲ့ ဆေးခန်းသွားပြတာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဆရာဝန်က သေချာကို စစ်ပေးတာ ပြီးတော့ infection ၀င်တာလို့ တန်းပြောတယ် ရှုင်းလဲ ရှင်းပြတယ် ဆေးလဲ လိုတာထက်ပိုမပေးဖူး။ ပထမ သုံးရက်စာ ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးကုန်သွားတော့ ရှင်းရှင်း မပျောက်သေးဘဲ နှာစေေးနတာနဲ့ နှစ်ခါသွားလိုက်ရတယ်။ ခုတော့ နေကောင်းသွားလို့ လျှောက်သွားနေပြီ 😊
အမိမြေက အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်... တော်သေးပြီ....
By Nay Chi Zaw at February 09, 2018 No comments:
By Nay Chi Zaw at January 14, 2018 No comments:
ဒီတစ်ခေါက် စင်္ကာပူကပြန်လာတော့ လေဆိပ်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မှာ ကြုံခဲ့ရတာလေး
Immigration counter မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လ သုံးလကမှ လုပ်ထားတဲ့ passport လေး ပေးလိုက်တော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ထမ်းက မေးတယ် နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်အဟောင်း စာအုပ်ပြပါတဲ့၊ ခု သုံးနေတဲ့ စာအုပ်က အသစ်လုပ်ထားတာမကြာသေးဖူး၊ စာအုပ်အဟောင်းက ပါလာတယ် ဒါပေမယ့် လွယ်ထားတဲ့အိတ်ထဲက အလွယ်တကူ ထုတ်လို့ မရတာနဲ့ မပါဖူးပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်၊ အဲဒီတော့ သူ့မျက်နှာက စိတ်အလိုမကျတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဘာလို့ မပါရတာလဲ ဘာညာပေါ့နော် ရစ်တယ်၊ ဘာလို့ စာအုပ် အဟောင်းလိုတာလဲလို့ ပြန်မေးတော့ ချက်ချင်း ပြန်မဖြေဖူး သူ့ဟာသူ ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေတာလဲ မသိဖူး.. ခနနေမှ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘယ်ရက်ထွက်သွားတယ် ဆိုတာ စာအုပ်အဟောင်းထဲက ကြည့်မှ ရမှာတဲ့ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို စာအုပ်အသစ်ထဲမှာ အရင် စာအုပ်အဟောင်းနံပါတ်ပါတယ်လို့ အဲဒါနဲ့ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ် အဲဒီတော့မှ စာအုပ်ကို ဟိုလှန်ဒီလှန်နဲ့ ဆက်လုပ်တယ် ပြီးတော့ ပွစိပွစိနဲ့ သူက အလကားမေးတာ မဟုတ်ကြောင်း လိုလို့မေးတာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့ ပြောပြီးမှ stamp လေးပေးပြီး သွားခိုင်းတော့တယ်။ အရင်တုန်းကလဲ passport အသစ် လဲဖူးပါတယ်။ တစ်ခါမှ စာအုပ် အဟောင်းကို immigration မှာ ပြခိုင်းတာ မကြုံဖူးပါဘူး။ ခုမှဘာဖြစ်သွားလဲ မသိဖူး။ စာအုပ်အသစ်က ဘယ်စာအုပ်အဟောင်းအတွက် ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ system ထဲမှာ ရှိသင့်တာပေါ့။ စင်္ကာပူမှာတုန်းက bank မှာ passport အသစ် သွား update လုပ်တော့ စာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးပေးလိုက်တာ အဲဒီက ၀န်ထမ်းက မလိုဖူးတဲ့ နောက်ဆို စာအုပ်အသစ်ပဲ ယူလာ အဲဒီထဲမှာ အဟောင်းနံပါတ် ပါပြီးသားဆိုပြီးပြောတယ်။ အစိုးရရုံးတွေ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့ MOM တို့ဆိုရင် online ကနေဖြည့်ပြီး တင်ပေးရုံပဲ လူတောင် သွားစရာမလိုဖူး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဆင်းရဲပြီး မဖွံဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ အဲလိုမျိုး စနစ်တကျ မရှိသေးတာကို လက်ခံလို့ ရပေမယ့် ကြိုပြီး အသိမပေးတာတော့ လက်ခံလို့ မရဖူး။ တကယ်လို့ စာအုပ်နှစ်အုပ်လုံး သယ်စေချင်တယ်ဆိုလဲ အသစ်လဲ ကတည်းက အဟောင်းကိုပါပြရမယ် ဆိုတာ အသိပေးထားရင် အဆင်ပြေသေးတယ်။ ခုတော့ ဘာမှန်းမသိ.ကိုယ်ပဲ တောသူရုပ်ပေါက်နေလို့ အချဉ်ဖမ်းပြီး ပိုက်ဆံတောင်းလို့ ရမယ် ထင်တာလား policy ပဲပြောင်းသွားတာလား မသိဖူး။
မကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြီးသွားတော့ ကောင်းတာလေးလည်း ချီးကျူးမှဖြစ်မယ်။ ဗီယက်နမ်ကပြန်လာတုန်းက wheelchair လေးနဲ့ဆိုတော့ လေဆိပ်က ဆင်းကတည်းက ၀န်ထမ်းကောင်လေးတစ်ယောက်လာခေါ်ပြီး အိတ်တွေဘာတွေ ရွေးပေး ပြီးတော့ အရှေ့မှာ ကားရောက်တဲ့အထိ စောင့်ပေးတယ် ကားတွေက ပိတ်နေတော့ အကြာကြီးပဲ စောင့်နေရလို့ သူ့ကို tip လေးပေးလိုက်တာ ကိုယ့်ကို ကြည့်ပြီး သနားလို့ထင်တယ် မယူပါဖူး အစ်မရယ်တဲ့ ငြင်းနေတာနဲ့ မနည်းပေးလိုက်ရတယ်။ လေဆိပ်မှာ ဒီလို သဘောကောင်းတဲ့ ၀န်ထမ်းလေးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် wheelchair service ကအလကားရတာ မဟုတ်ဖူး AirAsia ကို ၁၅ ဒေါ်လာ ပေးပြီး ၀ယ်ထားရတာ။ :(
ဒီတဈခေါကျ စင်ျကာပူကပွနျလာတော့ လဆေိပျက လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး မှာ ကွုံခဲ့ရတာလေး
Immigration counter မှာ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈလ သုံးလကမှ လုပျထားတဲ့ passport လေး ပေးလိုကျတော့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး ၀နျထမျးက မေးတယျ နိုငျငံကူးလတျမှတျအဟောငျး စာအုပျပွပါတဲ့၊ ခု သုံးနတေဲ့ စာအုပျက အသဈလုပျထားတာမကွာသေးဖူး၊ စာအုပျအဟောငျးက ပါလာတယျ ဒါပမေယျ့ လှယျထားတဲ့အိတျထဲက အလှယျတကူ ထုတျလို့ မရတာနဲ့ မပါဖူးပဲ ပွနျဖွလေိုကျတယျ၊ အဲဒီတော့ သူ့မကျြနှာက စိတျအလိုမကတြဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ ဘာလို့ မပါရတာလဲ ဘာညာပေါ့နျော ရဈတယျ၊ ဘာလို့ စာအုပျ အဟောငျးလိုတာလဲလို့ ပွနျမေးတော့ ခကျြခငျြး ပွနျမဖွဖေူး သူ့ဟာသူ ဘာတှေ အလုပျရှုပျနတောလဲ မသိဖူး.. ခနနမှေ မွနျမာနိုငျငံကနေ ဘယျရကျထှကျသှားတယျ ဆိုတာ စာအုပျအဟောငျးထဲက ကွညျ့မှ ရမှာတဲ့ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို စာအုပျအသဈထဲမှာ အရငျ စာအုပျအဟောငျးနံပါတျပါတယျလို့ အဲဒါနဲ့ ပွနျစဈကွညျ့လိုကျပေါ့လို့ပွောလိုကျတယျ အဲဒီတော့မှ စာအုပျကို ဟိုလှနျဒီလှနျနဲ့ ဆကျလုပျတယျ ပွီးတော့ ပှစိပှစိနဲ့ သူက အလကားမေးတာ မဟုတျကွောငျး လိုလို့မေးတာ ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျနဲ့ ပွောပွီးမှ stamp လေးပေးပွီး သှားခိုငျးတော့တယျ။ အရငျတုနျးကလဲ passport အသဈ လဲဖူးပါတယျ။ တဈခါမှ စာအုပျ အဟောငျးကို immigration မှာ ပွခိုငျးတာ မကွုံဖူးပါဘူး။ ခုမှဘာဖွဈသှားလဲ မသိဖူး။ စာအုပျအသဈက ဘယျစာအုပျအဟောငျးအတှကျ ထုတျပေးထားတယျဆိုတာ system ထဲမှာ ရှိသငျ့တာပေါ့။ စင်ျကာပူမှာတုနျးက bank မှာ passport အသဈ သှား update လုပျတော့ စာအုပျနှဈအုပျလုံးပေးလိုကျတာ အဲဒီက ၀နျထမျးက မလိုဖူးတဲ့ နောကျဆို စာအုပျအသဈပဲ ယူလာ အဲဒီထဲမှာ အဟောငျးနံပါတျ ပါပွီးသားဆိုပွီးပွောတယျ။ အစိုးရရုံးတှေ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးတို့ MOM တို့ဆိုရငျ online ကနဖွေညျ့ပွီး တငျပေးရုံပဲ လူတောငျ သှားစရာမလိုဖူး၊ ကိုယျ့နိုငျငံက ဆငျးရဲပွီး မဖှံဖွိုးသေးတဲ့ နိုငျငံဆိုတော့ အဲလိုမြိုး စနဈတကြ မရှိသေးတာကို လကျခံလို့ ရပမေယျ့ ကွိုပွီး အသိမပေးတာတော့ လကျခံလို့ မရဖူး။ တကယျလို့ စာအုပျနှဈအုပျလုံး သယျစခေငျြတယျဆိုလဲ အသဈလဲ ကတညျးက အဟောငျးကိုပါပွရမယျ ဆိုတာ အသိပေးထားရငျ အဆငျပွသေေးတယျ။ ခုတော့ ဘာမှနျးမသိ.ကိုယျပဲ တောသူရုပျပေါကျနလေို့ အခဉျြဖမျးပွီး ပိုကျဆံတောငျးလို့ ရမယျ ထငျတာလား policy ပဲပွောငျးသှားတာလား မသိဖူး။
မကောငျးတဲ့အကွောငျးပွောပွီးသှားတော့ ကောငျးတာလေးလညျး ခြီးကြူးမှဖွဈမယျ။ ဗီယကျနမျကပွနျလာတုနျးက wheelchair လေးနဲ့ဆိုတော့ လဆေိပျက ဆငျးကတညျးက ၀နျထမျးကောငျလေးတဈယောကျလာချေါပွီး အိတျတှဘောတှေ ရှေးပေး ပွီးတော့ အရှမှေ့ာ ကားရောကျတဲ့အထိ စောငျ့ပေးတယျ ကားတှကေ ပိတျနတေော့ အကွာကွီးပဲ စောငျ့နရေလို့ သူ့ကို tip လေးပေးလိုကျတာ ကိုယျ့ကို ကွညျ့ပွီး သနားလို့ထငျတယျ မယူပါဖူး အဈမရယျတဲ့ ငွငျးနတောနဲ့ မနညျးပေးလိုကျရတယျ။ လဆေိပျမှာ ဒီလို သဘောကောငျးတဲ့ ၀နျထမျးလေးတှလေဲ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ wheelchair service ကအလကားရတာ မဟုတျဖူး AirAsia ကို ၁၅ ဒျေါလာ ပေးပွီး ၀ယျထားရတာ။ :(
I wanted to change my blog to my own domain since long time ago. But I was busy and I did not post anything new for many years anyway and it was not necessary. Since I have to stay at home for at least one and half month and nothing much to do, I decided to do it. Unfortunately, the domain name I wanted was already taken. My requirements were very simple 'must be cheap', 'should not be too mainstream like .com/net/info' and name should be something I like. Luckily, I found something I like at cheap price. I tried to register at GoDaddy but it took some time to finish it. Payment is always an issue in Myanmar. Afterafew failed attempts to pay with paypal, I changed the payment method and managed to pay with the card issued in Singapore. Then I configured to redirect to my original blog www.naychizaw.blogspot.com and set up the url in Blogger and Godaddy settings. I followed the steps in this blog. It's very old blog post and GoDaddy UI is quite different. The new UI is simpler and can be done in one page. I modified two CNAME value in this setting instead of following steps in "Setting up CNAME and A Record for BlogSpot Custom-Domain Name".
Finally, my new domain is ready to use. ;)
By Nay Chi Zaw at December 19, 2017 No comments:
Android Issue - Unable to Instantiate Application
This issue(Unable to Instantiate Application - ClassNotFoundException) can be occured by many reasons. Rood cause could be different package name in manifest file, unsupported architecture, missing libs, etc.
I faced the similar issue today. But it only happened when the app was installed by adb command. It worked fine if app's installed from Android Studio.
java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate application com.demo.app: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "com.demo.app" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.demo-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/com.vkey.demo/lib/arm, /data/app/com.demo-1/base.apk!/lib/armeabi-v7a, /vendor/lib, /system/lib]]
After I've readafew questions on Stackoverflow and triedafew ways, I found the solution on this page finally. Thanks to Nick and Dileep Patel !!!
Solution is disabling Instant Run in Settings
References: https://developer.android.com and Stackoverflow
By Nay Chi Zaw at June 13, 2017 No comments:
Android Debug Certificate Expired Problem
Are you aware that Android debug certificate is only valid for one year/365 days? After your certificate’s expired, you’ll see the following error message while compiling android application.
Debug certificate expired on 7/15/11 7:00 PM!
You need to generateanew keystore to fix that error
1) Delete the current keystore
You can find the location of keystore in Eclipse (Preferences -> Android -> Build -> Default Debug keystore). It should be under ~/.android/debug.keystore (Linux and Mac OS X) and %USERHOME%/.android (Windows).
2) In Eclipse, Clean the project (Project -> Clean )
3) Close Eclipse and reopen Eclipse
Eclipse will generateanew keystore when you try to build your application.
Another way is you can create your own certificate with this command.
keytool -genkey -v -keystore debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android -keyalg RSA -validity [days]
By NayNay at July 20, 2011 No comments: